Breauty – Daily Feed MM
လျားစောင်းလက်ပက်နဲ့ ပေါင်းတင်ပြီး ဝက်ခြံတွေထွက်လာတာ ဒီအချက်ကြောင့်ပါ
Admin_John | December 1, 2021
ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ ပေါင်းတင်သူများ သတိထားကြပါနော်…(လှပတဲ့ အသားရည်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ)ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထူးသတိထားရမယ့် အချက်လေး တစ်ချက်ကို မျှဝေချင်ပါတယ်။ အလှအပ​​ရေးရာမှာ ရှားစောင်းဟာ နာမည်ကြီးပါတယ်။သူ့ကောင်းကျိုးတွေ အသုံးဝင်ပုံတွေ အသုံးပြုပုံတွေကတော့ အတော်များများ သိပြီးဖြစ်လို့ မပြောတော့ပါဘူး ။ သတိထားရမှာကတော့ ရှားစောင်းကို အသုံးမပြုခင်မှာ အဝါရောင် အဆိပ်ကို မဖြစ်မနေ ထုတ်ပေးဖို့ပါဘဲ ။ရှားစောင်း အပင်ကနေ
Admin_John | November 12, 2021
ထောပတ်စေ့ ရှိရင် စမ်းကြည့်နော်မျက်နှာမှာရှိတဲ့၊ဝက်ခြံအဆီအဖုတွေ ပျောက်စေမယ့်ကိုယ်တိုင်သုံးနေတဲ့ ထောပတ်စေ့ ဆေးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။မနေ့ က ကိုယ့်အကိုတစ်ယောက်နဲ့ video callပြောရင်း ဒီပို့စ်လေးရေးဖို့စိတ်ကူးရတယ်ဆိုပါတော့၊ ကိုယ့်အကိုအမတွေကို ကိုယ့်လိုလှစေချင်တဲ့စေတနာကတော့အဓိကပေါ့နော်။ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်အကိုအမတွေထဲမှာ မျက်နှာမှာ အဆီဖုလေးတွေ တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် ဝက်ခြံ နဲ့မျက်နှာအရေးအကြောင်းထင်တာတွေ တော်တော်များများတွေ့ရလို့ပါ။ ထောပတ်စေ့အကြောင်းလေးမပြောခင် ကိုယ့်အကြောင်းကို အရင်ပြောပါစေ။ကိုယ်ကတောသူပီပီ နယ်မှာနေတဲ့တလျောက်လုံးသနပ်ခါးပဲလိမ်းပါတယ် ။ ရန်ကုန်ရောက်ပြီး၃နှစ်ကျော်ကာလလေးအတွင်းမှာ
Admin_John | September 20, 2021
အုန်းချိုမွှေးတစ်ဧက တစ်နှစ် သိန်း ၈၀ ကျော်ရရှိနိုင်တယ်။ တစ်လကို ၆ သိန်းကျော် ရပါလိမ့်မယ်။အုန်းချိုမွှေးက အရည်သောက်အတွက် ဦးစားပေးစိုက်ပျိုးတာဖြစ်တယ်။၂နှစ်ခွဲ ၃နှစ်မှာ စသီးပါတယ်။ ၄နှစ် အထက်ဆိုရင် အသီးကောင်းပါမယ်။ အုန်းချိုမွှေးက အပင်အလုံးသေးပြီး အုန်းလက်က သိပ်မရှည်တာကြောင့် တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ကို ခပ်စိပ်စိပ် စိုက်နိုင်တယ်။ အုန်းတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင် ၅မီတာ(၁၆ပေကျော်) ကြားစိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်ဧကမှာ အပင်
ရာသီလာချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ ခံစားမှု ၃ မျိုး
Admin_John | July 8, 2021
စန်းစန်းတင့်မုဒ့် (အလိုလိုဒေါသထွက်နေ)။ဒီမုဒ့်ကတော်တော်များများအဖြစ်များတယ် ဘာတဲ့ဆို စိတ်ကတိုပြီ ဘာတဲ့ဆို ဆဲချင်ပြီ ရွဲ့သလိုလိုစောင်းသလိုလိုလေးတွေလည်းတင်ပြီ တကယ်ကဘယ်သူ့ကိုမှရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူး အကုန်လုံးကိုရည်ရွယ်တာ ထိတာနဲ့ ပေါက်မယ့် ဗုံးလိုပဲ တနေကုန်စိတ်လျော့စိတ်။ လျော့လို့ရေရွတ်ရင်း အကုန်လုံးကိုပတ်ဆဲနေပြန်ရော အဲ့ဒါစန်းစန်းတင့်မုဒ် ။Leave me alone mood (တစ်ယောက်တည်းနားအေးပါးအေး နေချင်တဲ့ ခံစားချက်)။ သူကကျအဆွေးမုဒ်ပေါ့ ဘယ်သူမှငါ့ကိုမချစ်ဘူး ဂရုမစိုက်ကြဘူး လူလည်းနာ ရင်လည်းနာ
ကိုယ်စိုက်တဲ့ သင်္ဘောပင်ကို “အမ” ပင်ပဲ ဖြစ်လာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေး
Admin_John | June 11, 2021
ပထမအဆင့်1. အသီး၏အောက်ပိုင်းအခြမ်းမှ အစေ့များကိုယူပါ။ ဒုတိယအဆင့်2. အစေ့များကိုရေစိမ်၍ ရေပေါ် ပေါ်လာသောအစေ့များကိုဖယ်ပါ။ ရေပေါ် ပေါ်သော အစေ့များသည် ကျန်းမာစွာသီးနိုင်ဖို့အခွင်းရေးနည်းပါသည်။ 3. ကျန်သောအစေ့များကို ရေစစ်ပါ။ သတိ: နေရောင်ဖြင့်အခြောက်မခံရပါ။ နေရောင်ဖြင့်အခြောက်ခံလျှင် အားနည်းသောပျိုးပင်များဖြစ်တတ်ပါသည်။ 4. ရေစစ်ထားသော အစေ့များကို အိုး၌တန်းစိုက်လျင်ပိုကျန်းမာသောအပင်ဖြစ်ပါမည်။5. ထိုနောက်အပင်ကို ရေလောင်းပေးပါ၊ နေရောင်ခြည်အောက်ထားပါ။ တတိယအဆင့်။6. ဒုတိယအဆင့်တွင် စိုက်က်ထားသောအပင်
Admin_John | February 20, 2021
အိန္ဒိယသူတွေအများစုဟာ ဆံပင်သန်စွမ်းမည်းနက်ပြီး ဆံသားကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံတာကို ဘောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ တွေ့မြင်ဖူးကြမှာပါ ပျိုမေတို့ရေ။ အခုပြောပြပေးချင်တာကတော့ အိန္ဒိယသူတွေ အသုံးပြုကြတဲ့ ဆံပင် အရှည်မြန်နည်း လျှို့ဝှက်ချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပတ်။ရှားစောင်းလက်ပပ်ဂျယ်လ်ဟာ အသားအရေ အလှအပနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက ဆံကေသာ အလှအပအတွက်ပါ အသုံးဝင်တဲ့ သဘာဝပစ္စည်းတမျိုးပါ ပျိုမေတို့ရေ။ ခေါင်းမလျှော်ခင် နာရီဝက် လောက်အလိုမှာ ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်ကရတဲ့
မျက်နှာအမည်းစက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း
Admin_John | December 23, 2020
မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေ၊ အမာရွတ်တွေ ကင်းစင်ပြီး အသားအရေကို စိုပြေလာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းမျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေ၊ အမာရွတ်တွေ ကင်းစင်ပြီး အသားအရေကို စိုပြေလာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ဒီတခါ မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ် ပါတယ်။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းမို့ စာဖတ်သူတို့ သဘောကျမှာပါနော်သံပယိုသီးနဲ့ အာလူးအရင်ဆုံး အာလူးကို ရေသေချာဆေးပြီး ကြိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်သံပယိုရည် နည်းနည်းထည့်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ သေချာလေးမွှေပေးပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ
ဆံကျွတ်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးများအတွက် ဆံပင်ထိန်းသိမ်းနည်း
Admin_John | December 1, 2020
ဆံပင်တွေ မကြာခဏအဆီပြန်ခြင်း၊ ညစ်ပတ်ခြင်းတို့ကြောင့် စိတ်ပျက်ရပါတယ်။ဒီတော့ ဆံပင်ကိုခဏခဏလျှော်ချင်လာကြပါတယ်။ ခေါင်းခဏခဏလျှော်ရင်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဦးရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းနဲ့ အခြားဆံသားပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်သက်သာစေမယ့် ခေါင်းလျှော်နည်း (၉)မျိုးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ရေနွေးနွေးလေး သုံးပေးပါ ပုံမှန်သုံးနေကြ ရိုးရိုးရေတွေက သင့်ရဲ့ဆံပင်စတိုင်လ်ကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်ပေးခြင်းက နောက်နေ့တွေထိ သင့်ရဲ့ဆံပင်တွေကိုသန့်ရှင်းနေစေပါတယ်။ ရေအပူချိန်ဟာ 38°С လောက်ရှိသင့်ပါတယ်။ ၂။ ဆံပင်ဖျန်းဆေးရဲ့ကောင်းကျိုး ဆံလုံးသေးသူနဲ့ ဆံသားပျက်စီးလွယ်သူတွေအတွက်
အပြစ်တင်စကား မပြောပဲ မေတ္တာထားပြီး ကုသိုလ်ယူသွားတဲ့ ကားဆရာ အဘကြီး
Admin_John | November 29, 2020
တကယ်ဆို ဒီအဘကြီးက အဲ့ဒီနားမှာ နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီချိုင့်ခွက်ကြီးက ဖြစ်နေတာကြာပြီ။ အားလုံးကသာ ဖြတ်သွား ဖြတ်လာ လုပ်နေကြပေမယ့် ဘယ်သူမှ အဖက်လုပ်ပြီး ချိုင့်ကြီးကို မဖို့ကြပါဘူး။ အမျိုးသားသွေးဌာနရှေ့ သွေး လာလှူတဲ့ကားတွေရပ်ရင် ဂျိုင့်ကြီးထဲပြုတ်ကျတာ ။ သူ့ကြောင့် ထိခိုက်သွားတဲ့ ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေလည်း မနည်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အားလုံးဟာ ငါနဲ့